GULUF GANACSI: Shiinaha oo jawaab middi ku taag ah ka bixiyay tarriifo uu Maraykanku kusoo rogey + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka GULUF GANACSI: Shiinaha oo jawaab middi ku taag ah ka bixiyay tarriifo...
(Beijing) 13 Maajo 2019 – Beijing ayaa ka aarsatay Washington oo tarriifooyin is daba joog ah kusoo rogtey badeecooyinka ay u dhoofiyaan Maraykanka, iyadoo markeeda badeeco ku kacaysa $60 milyan oo doollar oo Maraykanka ka timaada tarriifooyin dheeraad ah dul dhigtay.
Sida ay maanta sheegtay Wasaaradda Ganacsiga Shiinuhu, waxay tarriifadan cusubi hirgeli doontaa wixii loo gaaro 1-da bisha Juun ee soo dhow.
Kordhintan cusub ee tarriifooyinkan oo sare loo dhigay ilaa 25 boqolkiiba waxay toos u saameeynaysaa ilaa 5,000 oo nooc oo ah badeecooyinka uu Maraykanku keeno suuqyada Shiinaha.
Todobaadkii tegey, Aqalka Cad ayaa kordhiyey tarriifooyinka saaran badeeco ku kaceeysa ilaa $200 bilyan oo doollar oo uu Shiinuhu ka iibiyo Maraykanka, taasoo laga dhigay 25% iyadoo markii hore ahayd 10%.
Sidaa darteed, tillaabada Beijing waxay jawaab u tahay midda maamulka Trump oo tan iyo markii uu xilka la wareegey dagaal ganacsi ku hayey dalka Shiinaha.
Previous articleKHADKA KULUL: Muqdisho oo yeelatay KHADKA DEG DEGGA ah ee amaanka + Sawirro
Next article”Gaagaabso gaaboow!” – Ronaldo oo Florenzi ku shitay + Sawirro